Maka: i-google plus | Martech Zone
Maka: google plus
Yonke Imininingwane Odinga Ukuyibeka Ngokukhangisa kwe-SEO Yasendaweni
NgoMsombuluko, Juni 19, 2017 NgoMsombuluko, Juni 19, 2017 Douglas Karr
Besizijabulisa ngempela nenkampani yendawo yasekhaya lapha e-Indianapolis futhi sisebenza emizamweni yabo yokumaketha engenayo. Iningi lesipiliyoni sethu kuze kube manje besisebenza namakhasimende ebhizinisi abenethemba lokuthi azobekwa esifundeni futhi sibavulele amasu amahle. Leli klayenti elithile alikho komunye umuzi, noma kunjalo, futhi linomncintiswano wethani lapha. Sisebenzise isiza esimangazayo, sakha umtapo wolwazi omkhulu wokuqukethwe, owenziwe
Ngabe Ibhizinisi Lakho lilandela Imikhuba Emihle Yezokuxhumana Komphakathi?
NgoMsombuluko, Agasti 25, 2014 Douglas Karr
Imikhuba yokuziphatha kwabezindaba zenhlalo… le nkulumo ingenza nginyonyobele. Kubukeka sengathi kuhlala kunomuntu ozama ukusebenzisa isethi yemithetho kukho konke kulezi zinsuku futhi angikwazi ukukuma. Vele kukhona ukuziphatha okungamukeleki ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi… kepha ubuhle besikhulumi ukuthi noma ngabe uyayilandela imithetho noma cha, uzobona imiphumela. Nasi isibonelo… Ngilandela umhlinzeki wesevisi omkhulu we-imeyili ku-Twitter futhi sebengithumele kabili i-DM'd
NgoMsombuluko, Februwari 3, 2014 NgeSonto, ngoFebhuwari 2, 2014 Douglas Karr
Izindlela zokuxhumana nabantu ziyashintsha… kodwa anginasiqiniseko sokuthi ziyafeza isithembiso sazo. Ngokufuna ukuthola imali engenayo eyengeziwe, kubonakala kimi ukuthi iziteshi zenhlalo ezithandwa kakhulu kwi-Intanethi zidla zonke izici zenhlalo zamapulatifomu abo futhi zibulala nje zonke ukuthi zibe yiziteshi eziphakathi ezikhokhelwayo. Ngayo yonke inkazimulo nohlobo lokuxhumana nabantu… ubungacabanga ukuthi kungaba yinto enjalo
Umhlahlandlela Wensimu Wokuzula Imidiya Yezenhlalo
NgoMsombuluko, Januwari 6, 2014 NgeSonto, uJanuwari 5, 2014 Douglas Karr
Le infographic evela kuLemonly kanye ne-9clouds enikeza ukuqonda kokuthi ungayisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana ihlukile impela. Inhloso bekuwukupenda isithombe esicacile ukuphendula imibuzo emithathu ebitholwa yi-9clouds njalo - Yimaphi amanethiwekhi okufanele ngabe ngiwasebenzisa? Kungani kufanele ngisebenzise iPinterest noma iGoogle Plus noma [ukufaka inethiwekhi]? Iyiphi inethiwekhi elungele ibhizinisi lami? I-infographic yemidiya yezenhlalo ifaka izibalo ezibalulekile, izimakethe ezihlosiwe, izethameli nokuzinikela kwesikhathi kunethiwekhi ngayinye.
I-Falcon Social: Ukuphathwa Kwemidiya Yezenhlangano
NgoLwesibili, Okthoba 8, 2013 NgoMgqibelo, Septhemba 19, 2015 Douglas Karr
Nge-Falcon Social, abathengisi be-B2B basebenzisa izici ezinzulu njengokulinganisela okunamandla, ukushicilela, namathuluzi wokuzibandakanya ukudala ukuxhumana, ukwakha ukuqwashisa ngomkhiqizo, ukuthola ukuqonda, nokwenza imikhondo emisha yokuqhuba ibhizinisi labo lomphakathi. IFalcon iyi-suite ephelele ephelele egcwele izici ezinamandla zokubambisana kweqembu eliqinile, isilinganiso sokusebenza esiqondile, nokuzibandakanya kwamakhasimende okunamandla. Bangumkhiqizi Wokumaketha Othandwayo Ophezulu we-Facebook kanye ne-Google + Amakhasi Partner. Finyelela - Landelela eyakho